Nei Mwari Achibvumira Uipi Nokutambura? | Mashoko Akanaka
Mwari akabvumira vanhu kutonga kwenguva yakareba zvakakwana zvokuti zvaratidza kuti havagoni kugadzirisa matambudziko evanhu
Uipi hwakatanga panyika Satani paakataura nhema dzokutanga. Pakutanga Satani aiva ngirozi yakakwana, asi “haana kumira zvakasimba muchokwadi.” (Johani 8:44) Akachiva kunamatwa kunofanira kungoitwa Mwari chete. Satani akanyepera mukadzi wokutanga, Evha, uye akamunyengedza kuti amuteerere pane kuti ateerere Mwari. Adhamu akabatana naEvha pakusateerera Mwari. Zvakasarudzwa naAdhamu zvakakonzera kutambura uye kufa.—Verenga Genesisi 3:1-6, 19.
Satani paakafurira Evha kuti asateerera Mwari, akanga ari kutanga kupandukira kodzero yaMwari yokutonga. Vanhu vakawanda vakabatana naSatani pakuramba Mwari seMutongi wavo. Nokudaro, Satani akava “mutongi wenyika.”—Verenga Johani 14:30; 1 Johani 5:19.
2. Zvakasikwa naMwari zvainge zvakakanganisika here?
Mabasa ose aMwari akakwana. Vanhu nengirozi zvakasikwa naMwari zvaikwanisa kuteerera Mwari zvakakwana. (Dheuteronomio 32:4, 5) Mwari akatisika tiine rusununguko rwokusarudza kuita zvakanaka kana zvakaipa. Rusununguko irworwo rwunotipa mukana wokuratidza kuti tinoda Mwari.—Verenga Jakobho 1:13-15; 1 Johani 5:3.
3. Nei Mwari akabvumira kutambura kuti kuvepo kusvika iye zvino?
Kwenguva yakati, Jehovha akabvumira kuti vanhu vapandukire uchangamire hwake. Akazviitirei? Kuratidza kuti hapana zvinoitwa pakutonga asipo zvinobatsira vanhu. (Muparidzi 7:29; 8:9) Pashure pemakore 6 000 ekurarama kwevanhu, uchapupu hwacho huri pachena. Vatongi vevanhu vatadza kubvisa hondo, kuparwa kwemhosva, kusaruramisira kana kuti zvirwere.—Verenga Jeremiya 10:23; VaRoma 9:17.
Kusiyana nekutonga kwevanhu, kutonga kwaMwari kunobatsira vaya vanokugamuchira. (Isaya 48:17, 18) Munguva pfupi iri kutevera, Jehovha achagumisa utongi hwose hwevanhu. Vanhu vanosarudza kutongwa naMwari ndivo chete vachagara panyika.—Isaya 11:9.—Verenga Dhanieri 2:44.
4. Mwoyo murefu waMwari unotipa mukana wokuita sei?
Satani akati hapana munhu aizoshumira Jehovha zvisina udyire. Unoda here kuratidza kuti ikoko kunyepa? Unogona kuzviita! Mwoyo murefu waMwari unotipa tose mukana wokuratidza kuti tinoda utongi hwaMwari here kana kuti hwevanhu. Mararamiro edu anoratidza utongi hwatinosarudza.—Verenga Jobho 1:8-12; Zvirevo 27:11.
5. Tingasarudza sei Mwari seMutongi wedu?
Zvatinosarudza zvinoratidza kana tichida Mwari seMutongi wedu
Tinogona kusarudza Mwari seMutongi wedu nokutsvaka kunamata kwechokwadi kwakavakirwa paShoko raMwari, Bhaibheri. (Johani 4:23) Tinogona kuramba kuti Satani ave mutongi wedu nokusabatanidzwa mune zvematongerwo enyika nehondo, sezvakaitwa naJesu.—Verenga Johani 17:14.
Satani anoshandisa simba rake kuti tsika dzeunzenza uye dzinokuvadza dzionekwe sedzakanaka. Patinorega kuita zvinhu zvakadaro, dzimwe shamwari uye hama dzingatiseka kana kutipikisa. (1 Petro 4:3, 4) Saka tinofanira kuita chisarudzo. Tichashamwaridzana nevanhu vanoda Mwari here? Tichateerera mitemo yake inoratidza rudo neuchenjeri here? Kana tikadaro, tinoratidza kuti Satani akanyepa paakati hapana munhu aizoita zvinotaurwa naMwari kana aomerwa.—Verenga 1 VaKorinde 6:9, 10; 15:33.
Kuda vanhu kunoitwa naMwari kunopa vimbiso yokuti uipi uye kutambura zvichapera. Vaya vanoratidza kuti vanotenda izvi vachanakidzwa neupenyu panyika nokusingaperi.—Verenga Johani 3:16.